Kunqobe i-Pirates, i-Maritzburg naMazulu | Scrolla Izindaba
Kunqobe i-Pirates, i-Maritzburg naMazulu
Iphenathi kaThabiso Kutumela yanele ukuqinisekisa amaphuzu aphezulu e-Maritzburg United njengoba ishaye i-Black Leopards ngegoli elilodwa eqandeni enkundleni yezemidlalo i-Harry Gwala ngoLwesibili ebusuku emdlalweni we-DStv Premiership.
Uma sekuhlungwa, bekungumdlalo obizwa ngokuthi yimpi yezinja njengoba womabili amaqembu ebengaphesheya kwetafula, esendaweni ye-15 neye-16 ngokulandelana.
Ukunqoba kuqinisekise ukuthi amadoda ka-Ernst Middendorp uLidoda Duvha ahlale endaweni yesibili ukusuka ezansi ngomehluko wamagoli ngamaphuzu ayi-12 emidlalweni eyi-16, kanti i-Leopards yehlela endaweni yesibili uma uqala esanzi etafuleni le-log ngamaphuzu ayi-12 yize yengezelwe ngomdlalo.
Bekuwumdlalo obumuncu njengoba womabili amaqembu ebesondela ngokucophelela kulo mdlalo emzamweni wokungavumi ukushaya igoli kuqala kodwa ukungaphumeleli kwe-Leopards kuholele ekuhlulweni kwawo engxenyeni yokugcina yomdlalo.
Kweminye imidlalo, Amazulu FC kaBenni McCarthy athuthuke kakhulu anciphisa amathuba e-Supersport United okuvala isikhala phakathi kwabo nabaholi be-log i-Mamelodi Sundowns kulandela ukuhlulwa kwabo ngegoli elilodwa eqandeni.
USiphelele Mthembu ushayele Usuthu igoli elilodwa esiwombeni sokuqala.
Khonamanjalo, i-Swallows FC ikuzwile ukunqotshwa kwayo kokuqala kwesizini selokhu ibuyele kwiligi yezicukuthwane njengengubo ezinze eMpumalanga, i-TS Galaxy igudluze i-Dube Birds ngamagoli amabili kwelilodwa emdlalweni wamagoli amathathu e-Mbombela Stadium eMbombela.
ULindokuhle Mbatha noBevan Fransman bashaye amagoli abo ashiyana ngemizuzu emithathu ukukhansela iphenathi kaRuzaigh Gamildien ekuqaleni kwesiwombe sesibili.
I-Orlando Pirates ilwe kanzima ukushaya abesilisa abayishumi be-Bloemfontein Celtic ngegoli elilodwa eqandeni kulandela ikhadi elibomvu likaNdumiso Mabena esiwombeni sokuqala.
UFortune Makaringe ushaye igoli elilodwa esiwombeni sesibili ukuqinisekisa ukuthi amaBhakabhaka afaka ingcindezi kubaholi be-log i-Mamelodi Sundowns njengamanje abadlala phesheya.